Nihaona tamin'ny fitakiana goavana ny famaranana "Love on Tour" Harry Styles
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Nihaona tamin'ny fitakiana goavana ny famaranana "Love on Tour" Harry Styles
Harry Styles, ilay superstar maneran-tany nahazo ny loka GRAMMY Award no ho mpanakanto mozika voalohany amin'ny fanokafana lehibe ny UBS Arena ao amin'ny Belmont Park, NY, ny alahady 28 Novambra ho famaranana ny Love On Tour 2021. Ny tapakila dia hamidy manomboka ny zoma 5 Novambra amin'ny 12 ora atoandro ao amin'ny Ticketmaster.com.
Noho ny fitakiana goavana sy mba hahazoana antoka fa mahazo tapakila mivantana ireo mpankafy, dia azo alaina amin'ny alàlan'ny fandaharana Verified Fan an'ny Ticketmaster hatramin'ny Talata 2 Novambra amin'ny 12 ora atoandro ny fisoratana anarana mialoha ny fivarotana ity seho ity ao amin'ny UBS Arena, eo amin'ny sisin-tanin'i Queens sy Nassau County. Ny presale Fan verify dia hatao ny alakamisy 4 novambra amin'ny 12 ora atoandro miaraka amin'ny besinimaro amidy manomboka ny zoma 5 novambra amin'ny 12 ora atoandro. Misy antsipiriany bebe kokoa hita ao amin'ny https://hstyles.co.uk/tour.
Ny mpikambana ao amin'ny American Express Card dia hanana fidirana mialoha hividianana tapakila amin'ny fampisehoana Alahady 28 Novambra. Ny Amex Presale dia mandeha amin'ny alakamisy 4 Novambra amin'ny 12 antoandro ka hatramin'ny 10 alina ET alohan'ny vahoaka. Mba hanamarihana ny fiafaran'ny fitsidihan'i Harry maneran-tany, dia faly ny American Express namerina ny “American Express X Harry Styles Love Bus” – ilay fiara fitateram-bahoaka voaravaka 70 izay naseho tamin'ny fiandohan'ny fitsidihana efa ho roa taona. lasa tany Los Angeles.
Ao amin'ny UBS Arena, ny mpikambana ao amin'ny Card dia afaka miditra amin'ny fidirana haingana ary afaka mividy ampahany manokana amin'ny entam-barotra Harry Styles avy amin'ny toerana fivarotana rehetra manerana ny kianja.
Ny American Express vao haingana dia nanambara tombontsoa fanampiny maro isan-karazany amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fialamboly isan-karazany ao anatin'izany ny fidirana an-davaka ho an'ny fitsangantsanganana voafantina, ny fampisehoana an-tsokosoko ho an'ny mpikambana ao amin'ny karatra, ny fidirana mivantana sy ny efitrano fandraisam-bahiny any amin'ny toerana mpiara-miombon'antoka, ary ny entam-barotra manokana, izay manatsara ny traikefan'ny fialamboly #withAMEX. Manomboka amin'ny fivarotana mialoha ka hatramin'ny fampidirana teknolojia fandoavam-bola azo ampiasaina hanatsarana ny traikefa amin'ny fetiben'ny mozika, ny American Express dia natokana hitazonana ireo mpikambana ao amin'ny karatra mifandray amin'ny tontolon'ny fialamboly mandritra ny 25 taona mahery.
Misokatra ny 20 Novambra 2021, ny UBS Arena ao amin'ny Belmont Park dia natao ho an'ny mozika ary natao ho an'ny hockey. Ny toeram-pialam-boly sy fanatanjahantena voalohany indrindra ao New York ary tranon'ny New York Islanders dia novolavolaina tamin'ny fiaraha-miasa amin'ny Oak View Group, New York Islanders ary Jeff Wilpon. Manome fampisondrotana lehibe ho an'ny toekarena isam-paritra, indrindra rehefa misy fiatraikany be amin'ny hetsika ara-toekarena noho ny areti-mifindra, ny toeram-pialam-boly manara-penitra eran-tany, miaraka amin'ny endrika tsy manam-potoana sy mahazatra, dia hampifandray ny lasa malaza amin'ny teknolojia sy kojakoja mandroso ankehitriny.
Ny kianjan'ny zava-kanto mitentina 1.1 miliara dolara dia hampiantrano hetsika lehibe mihoatra ny 150 isan-taona ary manolotra traikefa fialamboly mivantana tsy manam-paharoa ao anatin'izany ny tsipika mazava sy ny acoustics voalohany. UBS Arena dia natao hitazonana olona 19,000 ho an'ny fampisehoana sy mpihaino hatramin'ny 17,000 ho an'ny lalao NHL. Ao anatin'ny ezaka hananganana hoavy maitso kokoa, ny UBS Arena dia mikasa ny ho tsy miandany amin'ny karbona ho an'ny asa alohan'ny 2024, izay hahatonga azy io ho kianja voalohany hanao izany any amin'ny morontsiraka atsinanan'i Etazonia.
Miorina eo amin'ny kianja manan-tantara ao Belmont Park, UBS Arena dia latsaky ny 15 kilaometatra miala ny seranam-piaramanidina JFK sy LaGuardia, ary azo idirana amin'ny alàlan'ny fiara sy ny fizaràna fiara amin'ny fivoahana 26A, 26B, ary 26D miala ny Cross Island Parkway. Ho an'ireo vahiny mampiasa ny Long Island Rail Road, ny UBS Arena dia ho azon'ny mpandeha any atsinanana sy andrefana ao amin'ny fiantsonan'ny Queens Village LIRR, ireo mpandeha any atsinanana amin'ny fiantsonan'ny Elmont vaovao (azo idirana any Andrefana amin'ny Fararano 2022), ary amin'ny alàlan'ny fiantsonana Belmont Spur, miasa avy any Jamaika amin'ny andro hetsika ihany. Ho fanampin'ny lalana Long Island Rail, dia azo idirana amin'ny alàlan'ny MTA Bus Routes Q2 sy Q110 ary ny serivisy bus Nassau County Inter-Express N6 ny kianja.
Ho an'ny fahasalamana sy ny fiarovana ny rehetra amin'ny fampisehoana Love On Tour ho avy Harry Styles, ny tompon'ny tapakila dia tsy maintsy manome porofo momba ny vaksiny COVID-19 feno na fitsapana ratsy ao anatin'ny 48 ora aorian'ny hetsika, ankoatra ny fanaovana saron-tava. Ny ankizy latsaky ny 12 taona dia afaka manatrika ny fampisehoana raha toa ka manome porofo ny fitiliana COVID-19 ratsy natao tao anatin'ny 48 ora taorian'ny fampisehoana.
Ho fanampin'izay, ny mpiasan'ny toerana rehetra isaky ny seho dia hanaraka ny protocole mitovy ihany koa ary mila manome porofo momba ny vaksiny COVID-19 feno na valin'ny fitsapana ratsy ao anatin'ny 48 ora, ary manao saron-tava amin'ny fotoana rehetra. Ny fitakiana saron-tava sy fitsapana, na porofo amin'ny vaksiny, no fomba tsara indrindra hiarovana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny ekipanay sy ny mpankafy anay ary lasa fenitra vaovao ho an'ny fampisehoana manerana an'i Etazonia. Tsy hisy maningana amin'ireo politika ireo. Entanina ny mpankafy hitsidika ny tranokalan'ny UBS Arena raha mila fanazavana fanampiny.